Wararkii Ugu dambeeyay ee Caalamka iyo waqabadka SBC International – SBC
Wararkii Ugu dambeeyay ee Caalamka iyo waqabadka SBC International
150 kun qof oo ka barakacay Abyey kadib weerarkii ciidamada woqooyiga ay ku qaadeen deegaankaas
Juba:- Wasiir ka arrimaha bani’aadimnimada xukuumadda koonfurta Sudan ninka lagu magacaabo James Kook ayaa sheegay in 150 kun oo qof ay ka carareen deegaanka Abyeey ee ku taal xadka kadib markii ay soo weerareen ciidamada woqooyiga Sudan .
Wasiirka ayaa tilmaamay in xaaladda deegaanka Abyeey ay tahay mid laga argagaxo islamarkaana dadka ay ka cararayaan deegaanka iyagoo ka cabsi qaba dhibaato kaga timaada ciidanka woqqyiga ee dalka Sudan.
Tirada uu shaaca ka qaaday wasiirka ayaa ah mid kabadan qiyaastii QM ee ahayd in tirada dadka ka barakacay Abyey ay gaarsiisan tahay 30-40 kun oo barakacayaal ah.
Dhanka kale xukuumadda woqooyiga Sudan ayaa sheegtay in ay suurtagal tahay in ay bilaawdo wadahadal lagu xalinayo dhibaatada.
Mas’uulka u qaabilsan xisbiga haya talada woqooyiga Sudan arrimaha Abyeey ayaa sheegay in uu filayo in ay bilowdaan wadahadal uu midowga Africa uu dhexdhexaadinayo.
Dadka u kuurgala siyaasadda ayaa sheegaya in hardanka ku aadan deegaanka Abyeey in uu horseedo dagaal sokeeye oo markale dhexmara woqooyiga iyo koonfurta Sudan.
Balse madaxweynaha xukuumadda koonfurta Sudan Silva Kiir ayaa sheegay in uusan dib dambi dagaal uga qarxi doonin koonfurta iyo woqooyiga Sudan .
Midowga Yurub iyo Japan oo isku afgartay xoojinta iskaashiga laba geesoodka si loola tacaamulo arrimaha bariga dhexe
Brussels:- Hogaamiyaasha midowga Yurub iyo dowladda Japan ayaa ku heshiisyey xoojinta iskaashiga laba geesoodka ah arrimaha caalamiga sida Bariga dhexe, Afghanistan,Iran iyo Soomaaliya.
Bayaan ka soo baxay shir madaxeeeka 20aad ee Yurub iyo Japan ayaa lagu xusay isbedelka taariikhiga ah ee kadhacay bariga dhexe iyo woqooyig Africa , waxayna tilmaameen taageeradooda rabitaanka shacabka ee dimuqaradiyada iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha.
Sidoo kale labada dhinac ayaa cambaareeyey dhibaatada loo geesanayo rayidka , waxayna carabaabeen walwalka qotada dheer ee arrimaha dalka Syria, waxayna ku nuuxnuuxsadeen in ay taabagelin doonaan cunaqabataynta si loogu qanciyo maamulka dalka Syria in uu wax ka bedelo qaabka uu ula macaamilayo dibadbaxayaasha .
Sidoo kale midowga Yurub iyo Japan ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay balaariso dadaalka si loo gaaro xal siyaasadeed oo dhameystiran.
Midowga Yurub iyo Japan ayaa balan qaaday in ay sii wadayan iskaashigooda sidii nabad loogu soo dabaali lahaa Afghanistan islamarkaana kor loogu qaadi lahaa taageerida mashaariicda horumarineed iyadoo la la kaashanayo ururada caalami iyo kuwa maxaliga ah.
Kulan madaxeedkaan waxaa hogaaminayey dhanka midowga Yurub guddoomiyaha midowga Yurub Herman Fan Romboy halka dhanka Japan uu u matalayey ra’iisal wasaaraha dalka Japan Nawto Kan.
Obama oo ku tilmaamay dabeylaha Missouri ( Maysuuri) musiibo qaran
Washington:-Madaxweynaha dalka mareykanka Brack Obama ayaa balan qaaday in uu ka gacan ka geysan doono dib u dhiska deegaanka Joplin gobolka Missouri ee ay dabeylaha burburiyeen usbuuc ka hor islamarkaana wuxuu ku tilmaamay kadib indha indheen uu ku sameeyey in wixii ka dhacay halkaas ay ahaayeen mussibo qaran.
Obama ayaa tilmaamay in caawimaada la gaarsiin doono dadka deegaanka iyadoo loo marinayo wakaaladda federaalka xaaladdaha deg dega.
Obama oo ka soo laabtay booqasho qaadatay lix maalmood oo uu ku tagay qaaradda Yurub ayaa booqday goobaha ay waxyeeleeyeen dabeylaha halkaasi oo uu ku soo arkay baabuur iyo guryo buruburay.
Obama ayaa ku soo gabagabeeyey booqashadiisa qaaradda Yurub magaalada Warsaw ee xarunta dalka Poland halkaasi oo kulumo kula qaatay madaxeynaha dalkaas ninka lagu magcaabo Bronisłaf Komorofiski.
Sidoo kale Obama ka qeyb galay shirkii madaxeedkii dowladaha ku hor maray wershadaha ee G8 magaalada Dufiil ee dalka Faransiiska.
Obama ayaa amaanay tijaabadii ay sameeyeen dalalkii ka go’ay midowgii Soviet ee burburay taasi oo uu ku tilmaamay in ay ka caawin doonto shucuubta carabta halganka ay ugu jiraan in ay helaan dimuqaraadiyad.
Xiriirka dalalka Poland iyo mareykanka ayaa mugdi soo kal dhexgalay kadib markii uu madaxweyne Obama joojiyey qorshe madaxweynihii isaga ka horeeyey Jorge Bush uu ugu rakibi lahaa gantaala ka difaaca dalkaas weerar uga yimaada dalalka ruushka iyo Iran.
Dowladda Poland ayaa noqotay dalkii ugu horeeyey ee ka tanaasula shuuciyadda sanaddii 1989.
Madaxweynaha dalka koonfur Africa oo maanta booqanaya dalka Libya
Johannesburg:- Xukuumadda koonfur Africa ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Jaakob Zuma uu maanta u safri doono maanta magaalada Tripoli ee xarunta dalka Libya si uu kulmo ula yeesho dhigiisa dalkaas Mucammar Al-qadaafi.
Bayaan ka soo baxay madaxtooyada koonfur Africa ayaa lagu sheegay in booqashada Mr Zuuma ay tahay mid la xiriirta xubinninadiisa guddiga sare ee midowga Africa ee xalinta dagaalada ka socda dalka libya.
Ma cadda in booqashadani uu ku tagayo madaxweynaha koonfur Africa dalka Libya mid diirada lagu saarayo istiraatiijiyada uu madaxweyne Qadaafi uga bixi lahaa dalka Libya.
Ilo wareed ku sugan xafiiska madaxweyne Zuuma oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in u jeedada booqashadani ay tahay ka hadalka istiraatiijiyada tagitaanka Qadaafi.
Mid kamid ah lataliyaasha madaxweyne Qadaafi ayaa sheegay in fursadani ay tahay tii ugu dambeysay ee lagu gaari lahaa xal dublumaasiaydeed balse waxa uu ku adkeestay in aan la filayn in Qadaafi uu xilka isaga dego sida ay doonayaan NATO iyo mucaaradka.
Xisbiga ANC ee uu madaxda ka yahay Zuuma ayaa cambaareeyey duqeymaha isbahaysiga NATO ee dalka Libya.
Mar sii horeesay idaacadda lagu magcaabo Talk Radio 702 ayaa sheegtay in madaxweyne Zuuma uu kala hadli doono Qadaafi sidii uu xilka isga dagi lahaa iyadoo la kaashanyo xukuumadda Turkiga.
Madaxweynaha dalka koonfur Africa ayaa bishii April booqasho ku tagay dalka Libya isagoo hogaaminaya erga ka socota midowga Africa si uu isugu dayo in madaxweyne qadaafi iyo mucaaradka Libya in ay sameeyaan xabad joojin balse dadaalkaas ayaa noqday mid fashilmay.